FAALLO:- Caqabadaha Shirka Cadaado u ekaa hal aan jirin ku jebisay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Calow Siyaasadeed, Dhaqameed iyo Isjiid-jiid beeleed ayaa waxay isku hor gudbeen hamiga ballaaran ee laga leeyahay Shirka Cadaado ee Dhismaha Maamul-gobaleedka Bartamaha Somalia.
Ergooyinka ka qeybgalayo Shirka Cadaado ayaa waxay u muuqdaan inay isku milman yihiin Ajendayaasha Shirka, waxaana jira dad ay ka go’an tahay in lagu guuleysto dhismaha Maamulka Bartamaha Somalia, halka kuwo kalena ay hagardaamo iyo lug-gooyo siyaasadeed la dhex yururaan Shirkaasi.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Beelaha wada deggan Goballadda Dhexe iska baylihinayaan Fursadaha ay ku dhisan karaa Maamul-gobaleed u gaar ah.
Siyaasiyiin, Aqoonyahanno iyo Odayaal Dhaqameed ku sugan Degmadda Cadaado ayaana laga dareemi karaa hankooda ku aadan Shirka, waxayna caqabadda ugu weyn tahay qaabka loogu kalsoonaan karo Guddiga Farsamadda ee Shirkaasi.
Qaar ka mid ah Musharaxiinta, Siyaasiyiinta iyo Odayaasha ka qeybgalayo Shirka ayaa saluug ka qaba Guddiga Farsamadda iyo Doorka Dowladda Federalka ee Agaasinka Shirkaasi.
Waa hubanti inay Khilaaf xooggan dhaliyeen Guddiyadda isbarbar-yaaca, isla markaana looga faa’ideysanayo siyaabo isbaasro siyaasadeed oo lagu sii carqaladeynayo Hanka Shirkaasi.
Siyaasiyiin waxaa jirta si cad u qeexay inaysan aqoonsanayn Guddiga Farsamadda ee Shirkaasi, kuwaasi oo aad u dhaliilsan Kalsoonida lagu qabi karo Guddigaasi, oo ay u arkaan kuwo u xaglinayo qaar ka mid ah Musharixiinta u taagan Madaxtunumadda Maamulka Bartamaha Somalia.
Saadaasha laga bixinayo Shirka Cadaado ayaan ahayn mid rajo-xumo xambaarsan, balse waxay Tusaale u tahay sida Aragtiyaha Dadka u kala duwanaan karto iyo sida ay Soomaalida ugu bislaanayaan Maamul-wadaagga iyo Doodaha Siyaasadda.
Ma xumo in Guddi la mucaarado, balse waxaan Aragti fiican ahayn in Guddi kale la magacaabo si loo muujiyo dhaliisha lo ohayo Guddiyadaasi.
Tan kale, Ergooyinka ka qeybgalayo halkii ay dhexdooda kaga doodi lahaayeen qoddobadda lagu aragti duwan yahay waxay door-bidaan inay Warbaahinta ku eed sheegtaan, iskuna mucaaradaan.
Markaynu isku soo duubno, Dowladda Federalka ayaa looga fadhiyaa inay hayinka u qabato Habsami-u-socodka Shirka Maamul-u-samaynta Goballadda Dhexe, haddii ayse Dowladda ka gaabiso arrintaasi, waxa uu Shirkaasi noqon karaa sidii Hal aan jirin ku-jebisay oo kale.